भारतमा नेपाली अभिनेत्री तथा मोडलको कल गर्ल पेसा, एक पटकको १ लाख ६० हजार रेट ! – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/भारतमा नेपाली अभिनेत्री तथा मोडलको कल गर्ल पेसा, एक पटकको १ लाख ६० हजार रेट !
काठमाडौं । भारतीय अधिकारीहरूले नेपालबाट गएर कल गर्लमा संलग्न एक मोडललाई उद्धार गरेको छ । जानकारी अनुसार नेपालबाट गएकी उनलाई ब’लपूर्व’क क’ल ग’र्लका रुपमा लगाइएको थियो ।
भारतको केन्द्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) का अधिकारीहरूले बेङ्गलुरुको एउटा ‘प्रख्यात’ होटेलमा छा’पा मा’रेर नेपालबाट गएकी २३ वर्षीया मोडललाई उद्धार गरेको हो ।
डेक्कन हेराल्डको अनलाइन संस्करणमा यो समाचार आएको थियो । यसले पीडितलाई कुन होटेलबाट बचाइएको हो भनेर बताएको छैन । पीडितको कथा धेरै अन्य महत्वाकांक्षी मोडलहरू र अभिनेताहरू भन्दा फरक हुँदैन जुन समाजविरोधी तत्वहरूको असर खेप्न पुग्छन् जसले महिलाहरुलाई यस व्यापारको ज’घन्य अ’परा’धमा लो’भ्याउन ग्लैमर वर्ल्ड प्रयोग गर्छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
स्थानीय प्रहरीका अनुसार नेपाली मोडल धेरै लामो समय अगाडि मुम्बई गएकी थिइन् । उनलाई त्यहाँ एक व्यक्तिले मोडलिङ्ग उद्योगमा ल्याएका थिए । उनी बलिउडमा आएपछि उनलाई भेटेकी थिइन् । उनलाई एक अज्ञात स्थानमा लगिएको थियो ।
उनलाई त्यहाँ ब’लपूर्वक स’म्बन्ध रा’ख्न बा’ध्य पा’रिएको थियो । यस घटनाको सबै भन्दा डरलाग्दो कुरा के भने उनीहरुले ति मोडलको भिडियो पनि बनाएका थिए । भिडियो बनाएपछि उनीहरुले उनलाई कल गर्ल बन्न बाध्य पारेका हुन् । उनीहरुले भने अनुसार नगरेमा उक्त भि’डियो लि’क ग’र्ने चे’तावनी पनि उनीहरुले दिएका थिए ।
डेक्कन हेराल्डले अन्वर खान भनेर चिनिने शहरको एउटा द’लालले बेङ्गलुरु आइपुगेपछि पुरुषको एउटा समूहले यस्तो सेवा प्रदान गर्ने वेबसाईट मार्फत ‘केटी’ बुक गरेपछि मुम्बईमा ए’स्कोर्ट आ’पूर्तिकर्तासँग सम्पर्क गर्ने गर्थे । भारतीय अधिकारीहरुका अनुसार २२ अगस्त २०१५ मा, उनी दिल्ली शहरमा उत्रिन् र उसलाई केन्द्रीय व्यापार जिल्ला क्षेत्रको होटलमा राखियो । धेरै ग्राहकहरु उनलाई भेट्न आउँथे ।
जानकारी अनुसार प्रति घण्टा ८० हजारदेखि १ लाख ६० हजारसम्म शुल्क लिन्थे । सुन्धवा नामक ग्राहकले उनलाई ‘अ’प्रा’कृति’क’ त’रिकाले स’म्ब’न्ध रा’ख्न बा’ध्य तु’ल्याउँ’दा अ’धिकारीहरूको ध्यानाकर्षण भयो । ति मोडलले त्यसरी स’म्बन्ध रा’ख्न अ’स्वीकार गरेपछि सबै खुलासा भएको हो । त्यसपछि ति ग्राहकले मोडलमाथि हात पनि हालेका थिए ।
यसपछि नै त्यस होटलमा केही गलत काम हुँदैछ भन्ने ‘अलार्म खडा’ भयो । विकासकर्ता र निर्माण ठेकेदार सागर र सुन्धवा भनेर चिनिने द’ललाई अहिले हिरासतमा छन् । पीडित मोडल, जो बलिउड उद्योगमा आफुलाई चिनाउने सपना देखेर भारत पुगेकी थिइन् । उनलाई एक एनजीओको जिम्मामा सुम्पिएको छ र एक उजुरी दर्ता पनि गरिएको छ । स्रोत